Kanneen arman gadii tajaajila bu`uri jijjiiramootaa bu`uura LibreOffice keessatti qaban ibsu.
Seera maqaa kannuu addiroota jijjiiramootaaf
Maqaan jijjiramaa olaantee fakkaattoota 225 irraa kan ijaarame dha. Maqaa fakkaattoo jijjiiramaa inni duraa dirqama qubee A-Z yookiin a-z ta`uu qaba. Akasumas lakkoofsotni maqaa jijjiiramaa keessatti ni garagaaru,garuu mallattoota tuqoolii fi fakkaattotni addaa hin hayyamamani, fakkaattoota Mmurgadii("_") quxaaloota irraa kan hafe. Bu`uuraLibreOffice keessatti addirootni jijjiiramaa dubbee miiraa miti. maqoonni jijjiiramaa iddoo ofkeessaatti ni qabatu garuu hojechuuf golbee arfakkuu keessatti hammatamu qabu.
Fakkeenyota addiroota jijjiiramootaaf:
Bu`uura LibreOffice keessatti jijjiiramaa duwwaa ibsuun nurraa hin eegamu. Ibsi jijjiirama hima Dim waliin hojjetama. Maqaalee qoodduudhaan addaan baasuun jijjiiramaa tokkoo ol altakkaatti ibsuu ni danda`ama.akaakuu jijjiiramaa hiikuuf, maqaa, yookiin jefuraa sirrii booda mallattoo ibsa akaakuu gargaarami.
Fakkeenyota ibsa jijjiiramaatiif:
Jijjiiramaa takkaa akka akaakuu tokkootti ergaa ibsitee booda, jijjiiramaa kana dabalataan maqaa walfakkaataa jalatti akka akaakuu adda addaatti hiikuun hin danda`amu.
Ibsa jijjiiramaa dhiibuu
Ibsa jijjiiramaawwan dhiibuuf, ajajaja armaan gadii gargaarami:
Himni Option Explicit SUB jalqabaa dura, mojuulii keessatti sarara jalqabaa ta`uu qaba. Waliigalaati, waraantoolee qofaatu ibsamuu qaba. Jijjiiramaawwan biraan hundi akkaataa akaakuu ibsa arfiitti ibsamu, yookiin yoo akka akaakuu qeenxee durtiitti ibsamu..
Bu`uuri LibreOffice kutaalee jijjiiramaawwanii afur deggara:
Jijjiiramaawwanlakkoofsa gatiiwwan lakkoofsa ofkeessatti ni qabatu.Jijjiiramaawwan tokko tokko lakkoofsota guddaa fi xixiqqoo kuusuuf gargaaru, kanneen biroon immoo tuqaa bololi`u yookiin lakkoofsota firaakshiniif gargaaru.
Jijjiiramaawwan diraa diraawwan arfii ofkeessaa qabu.
Jijjiiramaawwan Buuliyaanii TRUE yookiin FALSE ofkeessatti qabatu.
Jijjiiramaawwanwantaa akaakuuwwan wantoota adda addaa, kan akka gabatootaa fi galmeewwanii galmee keessatti ni kuusa.
Jijjiiramaawwan intergaa dheeraa -32768 hanga 32767tti ni hangaa`u. Osoo gatii tuqaa bololi`u jijjiiramaa intergaa dheerraa ramadne, bakkootni kurnyee gara intergaa itti aanuutti ni siiqu. Jijjiiramaawwan intergaa dheeraan adeemsa keessa ariitiin ni hediisamu akasumas lakkaawwiidhaaf ni mijatu. Jijjiiramaa intergaa dheeraan baayitiisi kuufannoo lama ni barbaadu. "&"n arfii ibsa akaakuuti.
Jijjiiramaawwan Intergaa dheeraa
Jijjiiramaawwan intergaa dheeraa -2147483648 hanga 2147483647tti ni hangaa`u.Osoo gatii tuqaa bololi`u jijjiiramaa intergaa dheerraa ramadne, bakkootni kurnyee gara intergaa itti aanuutti ni siiqu. Jijjiiramaawwan intergaa dheeraan adeemsa keessa ariitiin ni hediisamu akasumas lakkaawwiidhaaf ni mijatu. Jijjiiramaa intergaa dheeraan baayitiisi kuufannoo afur ni barbaadu. "&"n arfii ibsaa akaakuuti.
Jijjiiramaawwan kurnyee lakkoofsata poozatiivii yookiin Negeetivii yookiin zeeroo fudhachuu ni danda`u.gigiitonni sirrinaa hanga 29ti dha.
Mallattoota idaatii (+) yookiin hir`isuu (-) lakkoofsota kurnyeef (bakkoota wajjin yookiin bakkota malee) akka dureetti gargaaramuun ni danda`ama.
Lakkoofsi kurnyee osoo gara jijjiiramaa intergaatti ramadame, bu`uuri LibreOffice fakkii ol yookiin gadi ni buta.
Jijjiiiramaawwan sharafaa akka lakkoofsota biiti 64ti (8 Bytes) ni kuufamu akasumas akka lakkoofsa kurnyee dhaabbataa kurnyee hin taane 15 wajjintii fi bakkoota kurnyee 4tti agarsiisamu. Gatiiwwan -922337203685477.5808 hanga +922337203685477.5807t ni hangaa`u.Jijjiiramaawwan sharafaa gattiiwwan sharafaa sirreefama guddaa wajjin hediisuuf gargaara. Arfii ibsa akaakuu "@" dha.
Jijjiiramaawwan buuliyaanii gatiiwwan: TRUE yookiin FALSE keessaa tokko kuusa. lakkofsi 0n FALSE madaala, gatiin kan biraan hundi TRUE madaalu.
Jijjiiramaawwan guyyaa gatiiwwan guyyootaa fi sa`atii dhangii keessatti kuufaman qabata.Gatiiwwan jijjiiramaawwan guyyaatti Dateserial, Datevalue, Timeserial yookiin Timevalue wajjin ramadaman dhangii keessatti ofumaan ni jijjiramu. Jijjiiramaawwan-guyyaa lakkoofsota jumootti faankishinii Guyyaa, Ji`aa, Waggaa yookiin Sa`atii, Daqiiqaa, sekoondii gargaaramuudhaan ni jijjiiramu. Dhangiin kessaa gatiiwwan addaddummaa guyyaa/sa`atii lamaan gidduu jiru addaan baasuun walmadaalsisuuf dandeesisa.Jijjiiramaawwan kunis jefuraa Guyyaa tiin ibsamu..
Gatiiwwan jijjiiramaa qubduraa
Jijjiiramaan akkuma ibsameen, ofumaan gatii "Null" ni ta`a.Jijjiiraawwan armaan gadii ilaali:
Jijjiiramaawwan lakkoofsaa akkuma ibsamaniin gara gatii "0"tti ni ramadamu.
Jijjiiramaawwan guyyaa gatii 0 ofkeessaatti ramada; akasumas gatii "0" fankishinii Guyyaa, Ji`a, Waggaa yookiin Sa`atii, Daqiiqaa, sekoondii wajjin ni jijjiiru.
Jijjiiramaawwan diraa yommuu ibsaman diraa-qullaaa ("") ni ramadu.
Bu`uuri LibreOffice waraantoolee fuul-tokko yookiin fuul-baay`ee, akaakuu jijjiiramaa ifteessamanii ni beeka. Waraantooleen gulaalii tarreeewwannii fi gabateewwan sagantaalee keessaatiif mijaa`oodha.Tokko tokkoon maalimoota waraanta kasaa lakkoofsaa keessaan ni qajeelchamu.
Waraantooleen dirqamat hima Golgolii wajjin ibsamu.Hangii kasaa warantoo ibsuuf tooftaaleen baay`een ni jiru.
hangiin kasaa lakkoofsota poozatiivii akasumas negeetiivii qabaachuu ni danda`a.
dhaabbattootni gatii dhaabbataa qabu. Isaan kunis sagantaa keessatti takkaa iddoo ibsamee booda dabalataan ibsuun hin danda`amu:
Title is: Jijjiiramoota gargaaramuu